HDPE tuuboyinka biyaha, HDPE tuubo tuubada, Power tuuboyinka - Xinqihang
HDPE tuuboyinka biyaha
HDPE Dheecaan tuuboyinka
HDPE tuuboyinka adag ee adag
Xoojinta Strip Steel Strip
HDPE caaga steel fuuli
HDPE Hollow Wall fuuli
HDPE Double Wall jiingado tuuboyinka
Beebka tamarta ee 'CPVC'
Aluminium Daawaha Aluminium dahaarka Caaga tuuboyinka
HDPE Nidaamka Tuuboyinka Gaaska
Nidaamka tuuboyinka injineernimada degmada
HDPE GSHP tuuboyinka
HDPE Trenchless biibiile
HDPE Qalabka Fusion Fusion
HDPE Siphon tuuboyinka
HDPE jiingado tuuboyinka
Daadinta Nidaamka tuuboyinka injineernimada
HDPE tuuboyinka tuuboyinka
Nidaamka Tuuboyinka Waraabka Beeraha
HDPE Waraabka tuuboyinka
HDPE Biibiile rakiban
PE Cadaadis tuuboyinka
Eeg Dhammaan Mashaariicda
Qeexitaannada Soo Diraya
Soo Gal Macaamiil
Raadi Wakiilka Iibka kuugu dhow
Guud ahaan waa la ogyahay in tuubooyin iyo rakibyo ka sameysan walxaha kuleylka leh si balaaran loogu adeegsado warshadaha halka gudbinta dareerayaasha aadka u daxalka badan iyo gaasasku ay u baahan yihiin qalab dhisme oo tayo sare leh, oo ay ka muuqato iska caabin u nugul daxalka.
Qoraallada farsamada waxaa loogu talagalay inay bixiyaan dood dhammaystiran oo ku saabsan dhinacyada kala duwan ee naqshadeynta iyo rakibidda tuubbada vinidex iyo nidaamyada rakiban. Qoraalada farsamo ee soo socda ayaa la heli karaa
Marka tuubada PE la farsameeyo, laguma daro xasiliyaha cusbada birta culus, maaddadu waa mid aan sun ahayn, lakab sare uma lahan, ma laha taranka bakteeriyada, waxayna xallineysaa wasakheynta labaad ee biyaha la cabbo ee magaalooyinka.
Caabbinta daxalka u fiican
Marka laga reebo xoogaa ogsajiyeyaal xoog leh, waxay u adkeysan kartaa nabaad-guurka noocyada kala duwan ee warbaahinta kiimikada; ma jiro daxalka koronto.
Xaaladaha lagu qiimeeyo heerkulka iyo cadaadiska, dhuumaha PE waxaa loo isticmaali karaa si badbaado leh in ka badan 50 sano.
Cadaadis saameyn wanaagsan
Tuubada PE waxay leedahay adkeyn wanaagsan iyo iska caabin saameyn sare leh, walxaha culusna si toos ah ayaa looga tuujiyaa tuubada, taas oo aan u horseedi doonin dhuumaha inuu dillaaco
Waxqabadka isku halleynta
Awoodda isku-dhafka kululeeyaha PE ama isku-dhalaalka korantada ayaa ka sarreeya tan jirka tuubbada, laabatana iskuma jabi doono dhaqdhaqaaqa ciidda ama culeyska nool awgeed.
Waxqabadka wanaagsan ee dhismaha
Dhuumaha waa miisaan culus, habka alxanka waa mid fudud, dhismuhuna waa ku haboon yahay, qarashka guud ee mashruucuna waa hooseeyaa.
Tuubooyinka HDPE way ka fudud yihiin tuubooyinka shubka ah, tuubooyinka galvanized iyo tubooyinka birta. Way fududahay in la maareeyo oo la rakibo, iyo baahida hoose ee loo qabo baahida shaqaalaha iyo qalabka waxay ka dhigan tahay in kharashka rakibaadda ee mashruuca si weyn loo dhimay.
Cadaadiska socodka hooseeya
HDPE biibiile wuxuu leeyahay dusha sare oo siman oo isku dheelitirkiisa Manning waa 0.009. Waxqabadka siman iyo sifooyinka aan dhejiska lahayn waxay hubinayaan in tuubooyinka HDPE ay leeyihiin awood gaarsiin ka badan tuubooyinka dhaqameed, isla mar ahaantaana hoos u dhigaya cadaadiska luminta tuubooyinka iyo isticmaalka tamarta ee gudbinta biyaha.
pe tuubada biyaha
Waxaan nahay Khuburo Plastics iyo Geosynthetics
Waxay u heellan tahay hagaajinta waxtarka iyo nabadgelyada gaadiidka dareeraha, taasoo ka dhigaysa bani-aadamka caafimaad qab iyo adduunba mid wanaagsan. Hadafkeena iyo himiladeenu waa inaan noqono shirkad lagu kalsoonaan karo oo u abuureysa qiime bulshada, macaamiisha, saamileyda iyo shaqaalaha, una qaadata hal-abuurnimo xoog dhaqaajin horumar waara.
Shirkaddu waa shirkad tiknoolajiyad sare leh oo isku dhafan R&D, wax soo saar iyo iib. Waqtigan xaadirka ah, waxyaabaha ugu waaweyn ee shirkaddu soo saarto waa injineernimada degmada, injineernimada gaaska, injineernimada qodista, injineernimada macdanta, waraabka beeraha, injineernimada awoodda lix nidaam, tuubooyin biyo siiya HDPE, dhuumaha HDPE qashinka, HDPE dhuumaha gaaska, HDPE olol-retardant dhuumaha macdanta antistatic, HDPE Dhuumaha mashiinka kuleylka ee dhulka, HDPE siphon dheecaanada tuubada, rakibida tuubada HDPE, MPP tuubooyinka jaakada, iwm waa in kabadan 20 taxane iyo in kabadan 6000 oo ah alaabooyinka.
Xuzhou Xinqihang Caaga Warshadaha Co., Ltd.
Shirkadeena waxay si daacadnimo leh ulashaqeyn doontaa asxaabta dhamaan qeybaha kala duwan ee bulshada fikirka iskaashi ee "tayo tayo sare leh, sumcad tayo sare leh, adeeg tayo sare leh" si loo abuuro mustaqbal wanaagsan!
HDPE suunka steel xoojiyay dalab suuqa jiingado jiingado muquuninta
Sanadihii la soo dhaafay, iyadoo la ilaalinayo dhowrista tamarta qaranka iyo yareynta qiiqa ka baxa iyo ...
Astaamaha tuubada PE iyo baaxadda isticmaalka
Nidaamka bullaacadaha iyo biyaha, tuubooyinku waa qayb muhiim ah oo ka mid ah, sidaa darteed tayada ...
Cinwaanka: Qing'an Aagga Isku-urursiga Warshadaha, Magaalada Xuzhou, Gobolka Jiangsu